SPC Zion Air Pro, a TWS ọzọ na a ezi uche price [Analysis] | Akụkọ akụrụngwa
SPC Zion Air Pro, a TWS ọzọ na-agbanwe price [Analysis]
Ofwa nke ezi ekweisi na-aga n'ihu na-agbasa site na mmali na oke, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị teknụzụ niile enweworị ngwaahịa nwere njirimara ndị a, anyị nwere ike ịsị na ha bụ ndị dimkpa na-achị nke ọma na ọ bụ ya mere enwere ọtụtụ ndị ọzọ anyị na-ahụ n'ahịa na nke ahụ bụ ụlọ ọrụ Spanish SPC mara nwa oge.
Anyị na-alaghachi na tebụl nyocha, oge a na ekweisi Spanish TWS ọhụrụ Zion Air Pro si SPC, echefula nyocha anyị miri emi iji hụ ihe kachasị mma na adịghị ike nke ngwaahịa a. Dị ka mgbe niile na ebe nrụọrụ weebụ ị tụkwasịrị obi, Akụrụngwa Actualidad.
2 Nhazi na nnwere onwe
3 Nka nka na ụzụ
Ka anyi buru uzo gaa na ngwugwu ndi nwere teknụzụ. Anyị na-amalite site n'okwu ikpe ya, ngalaba dị mkpa karịsịa ebe ọ bụ ebe a ga-echekwa ekweisi anyị ọtụtụ oge. Anyị nwere a na-acha ọcha odori ikpe na a matte imecha na na udi nke a "Erere", a imewe na anyị na-ahụ na ndị ọzọ dị ka Ime Anwansi Earbuds nke Sọpụrụ. Ọ bụ kọmpat na dabara nke ọma na anyị n'akpa uwe, anyị nwere 80 x 33 x 30 millimeters na mkpokọta ọ bụkwa na ha na-etinye batrị n'ime ka ha na-ebu ekweisi. O doro anya na ọ nwere usoro nju nke na-adọta ekweisi n'ọnọdụ ha. Na-amasị ha? You nwere ike ịzụta ha n'ime EGO A.
Igweisi ahụ ugbu a nwere usoro ọdịnala mara mma, anyị nwere 40 x 18,8 x 25,2 millimeters na mkpokọta na ibu ibu nke 4 grams ọ bụla earbud. Ha dị mfe ma bụrụkwa plastị ọcha na-acha ọcha. Ha nwere sadi mpe mpe akwa sita anyi nwere obere akpa na ngwugwu nke gunyere “S” na size “L” ka e wee hazie ha ihe nile masiri ha na mkpa ha. N'akụkụ a anyị enwebeghị nsogbu ọ bụla, anyị achọpụtaghị na ha dara ma ọ bụ na-enye nsogbu nke ukwuu.
Nhazi na nnwere onwe
Banyere nhazi ahụ, ọ dị mfe, anyị ga-ekwusi ike na anyị enweghị bọtịnụ anụ ahụ ọ bụla na igbe. Mgbe anyi nabatara ha, ime ka ha rụọ ọrụ, o zuru ezu itinye ha n'ime igbe ahụ. Mgbe ewepụrị ya, ikanam ahụ ga-amalite ịgba ma gosipụta ya na Bluetooth nke ngwaọrụ anyị. Anyị ahụbeghị usoro nchekwa, ya mere a na-ahazi ha iche iche na ngwaọrụ ọ bụla nke anyị ga-ejikọ ha.
Mgbe ọ na-abịa na-arụ ọrụ, dị nnọọ wepụ ha na igbe na anyị ga-ahụ na ha ga-ejikọta ngwa ngwa site na Bluetooth na ngwaọrụ ejikọtara, n’enweghị nsogbu ọzọ.
Zụrụ SPC Zion Air Pro: Jikọọ
N'ihe banyere nnwere onwe, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwe anyị nkwa awa 5 nke ọkpụkpọ ọdịyo na ụgwọ, na ule anyị, anyị eruola elekere anọ. A na-akwụ ụgwọ ọrụ igbe ahụ dum site na USB-C USB na oge ngụkọta nke awa abụọ, mgbe ụgwọ zuru nke ekweisi n'ime igbe ga-ewe anyị ihe dị ka nkeji 90.
N'aka nke ya, igbe nwere ihe anọ Ikanam nke ga-egosi oge 25% nke ụgwọ nke a, nke ahụ ga-adịgide mgbe ha na-akwụ ụgwọ ekweisi n'ime, yana mgbe anyị wepụrụ ha n'okwu ahụ. Anyị nwere mkpokọta 420 mAh nke batrị ahụHa na-ekwe nkwa ruo oge 16 nke egwuregwu na ọtụtụ ebubo n'okwu ahụ.
Iji rụọ ọrụ SPC Zion Air Pro a na teknụzụ Bluetooth Bluetooth, N'ihi ya, a na-ejikọta ha ngwa ngwa na enweghị mkpa maka nhazi ọzọ ozugbo. Ọ dakọtara na HSP, HFP, A2DP, AVRCP na profaịlụ AAC ọdịyo na anyị nwere ndakọrịta maka Siri na Google Assistant.
N'otu aka ahụ, oke kachasị nkwa dị gburugburu 10m site na isi iyi. Maka akụkụ ya, anyị nwere igwe okwu na ntị ntị ọ bụla ga-ebutekwa n'èzí ụda iji belata nkuzi mgbamejije na teknụzụ "Pro Sound" nke SPC.
O doro anya na anyị nwere metụ panel na ekweisi abụọ ga - enyere anyị aka:
1 aka: Gwuo ma kwụsịtụ
1 aka aka ogologo: Na-esote ma ọ bụ abụ gara aga
1 aka: Bulie na doghachi oku
1 pịa ogologo: Jụọ oku ahụ
2 taps: Kpọọ onye inyeaka olu
1 ise aka nke abụọ: Gbanyụọ ekweisi
Ihe ndị a niile bụ ohere nke njikwa aka na-enye anyị yana nke zuru oke na ntuziaka nke ngwugwu ahụ. Anyi aghaghi ichefu na anyi nwekwara nguzogide IPX5 nke ga - enyere anyị aka imega ahụ na - enweghị nsogbu na ọsụsọ, na ule anyị ọ dịla.
Anyị na-amalite site na ahụmịhe onye ọrụ. Ekweisi na-adị mfe enịm na itu obere, ma ọ bụrụ na anyị na-eji ziri ezi na mpe mpe akwa anyị agaghị enwe nsogbu mgbe na-egosipụta. Ha bụ ezigbo ekweisi ọgụ, n'ihi na n'agbanyeghị ihe anyị nwere ike iche n'echiche na ha anaghị ada (opekata mpe na ule anyị) ma anyị nwekwara ike ịtụle na ha dị njikere iguzogide ọdịda na ọsụsọ nyere ha iwu, na ngalaba a, afọ juru m, na-abanye nyochaa ọnụahịa nke ngwaahịa ahụ na njedebe ya.
Banyere ụda dị mma, anyị na-ahụ ngwaahịa ziri ezi, ọzọ na-atụle ọnụahịa ahụ. Anyị nwere oke olu na-efu efu ihe, agbanyeghị, anyị ahụghị mgbagọ ma ọ bụ mkpọtụ.
Ezie na ọ bụ eziokwu na enweghị ụzọ pụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngụkọta nakwa na ndị dị ala bụ akaebe. Anyị na-eche ihu ekweisi dị ọnụ ala na ha na-enye ụda dịka ọnụahịa nke ngwaahịa ahụ, na-enweghị nkwanye ugwu ọzọ.
Oku gi dikwa oke mkpa, na nke ugbu a, anyị ahụla igwe okwu zuru oke, nke nwere ike ịta ahụhụ na gburugburu ebe ọ bụla na-eme mkpọtụ, mana nke na-agaghị ekwe omume iji, dị ka ọ dị na ndị asọmpi ndị ọzọ.
Anyi aghaghi iburu n’uche na imewe ya na-aga nke oma, ikike na oru ya na-adi nma nke oma karie ihe nile kariri 60 euro. Ọ bụ eziokwu na ha gafere na ọnụahịa ndị ọzọ dị ka Xiaomi, mana nke bụ eziokwu bụ na anụghị ha ka njọ ma ọ bụ karịa, yabụ nhọrọ nke SPC nyere atụmatụ ya dị mma. Nwere ike nweta ha site na euro 55 na Amazon (Njikọ) o na weebụsaịtị nke ha.
A kọmpat, mma na fechaa imewe
Mfe iji melite ma gosipụta ọgaranya
Ọnụahịa na-adọrọ mmasị
Ndị nke ala na ndị etiti na-efu
Ikanam anaghị agbanyụ mgbe odori
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » SPC Zion Air Pro, a TWS ọzọ na-agbanwe price [Analysis]
Tronsmart na - ewetara Apollo Bold, ekweisi ikuku na kagbuo mkpọtụ na - arụ ọrụ
ROG Strix Scar 17, laptọọpụ egwuregwu na-adịchaghị egwu [Analysis]